बाँकेको खजुरामा श्रीमतीलाई लखेटेर बाबुले गरे छोरीको बलात्कार — Paschimnews.com News From Nepal
बाँकेको खजुरामा श्रीमतीलाई लखेटेर बाबुले गरे छोरीको बलात्कार
महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहदा बाँकेमा हाडनाता करणीको जघन्य अपराध बाहिर आएको छ । एक बाबुले १६ वर्षकी आफ्नै छोरीलाई करणी गरेका छन् ।
मदिरा सेवन गरेर श्रीमतीलाई कुटपिट गरेर लखेटेपछि ४२ वर्षका बाबुले राती छोरीलाई कुकर्म गरेको उजुरी परेको छ । उजुरी अहिले परेपनि घटना असार दोस्रो साताको हो । घटना विवरण अनुसार, असार ४ गते सदाझैँ उनी मदिरा सेवन गरेर आए ।
श्रीमतीसँग झगडा भइरहन्थ्यो । त्यो दिन पनि झगडा भयो । श्रीमतीलाई कुटपिट गरे । कति कुटाइ सहने भन्दै श्रीमती माइती हिँडिदिइन् । दुई छोरी घरमै थिए । छोरीहरु छुट्टाछुट्टै सुत्थे । बाबु बाहिर गोठमा खाट राखेर सुत्ने गर्दथे ।
कुटिएपछि रिसाएर माइती गएकी श्रीमती एक महिनापछि घरमा आइन् । आमा घरमा आएपछि छोरीले सबै कुरा बताइदिइन् । के गर्ने, कसो गर्ने उकुसमुकुस भयो । आफन्तीहरुसँग पनि सल्लाह भयो ।
सबैले ‘यस्तालाई त्यत्तिकै छोड्नुहुँदैन’ भन्ने राय दिए । यद्यपि, प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरिएको थिएन । गत सोमबार (९ गते) फेरि उनले श्रीमतीलाई कुटपिट गरे । प्रहरीलाई खबर भयो । प्रहरी घरमा पुग्यो । मदिरा सेवनसँगैको झगडा भएकाले ‘एकछिन धम्क्याइ–धुम्क्याई’ गरेर छोड्ने प्रहरीको मनसाय थियो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय, धनौलीका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक पोषणराज थपलियाले भने, ‘घर झगडा थियो । एकछिन डर देखाई परिवारमा मिलन गराएर छोडिदिनु पर्ला भन्ने सोचेको थिए ।
कुरा यत्तिमात्रै छैन सर भनेर श्रीमती बोलिन् । राती परिसकेको थियो । कुरा अरु पनि गम्भीर छ भनेपछि हामीले उसलाई लिएर आयौं ।’ मंगलबार घरपरिवारका अन्य सदस्यहरु इलाका प्रहरी कार्यालय, धनौलीमा आए । स्थानीय जनप्रतिनिधि र छिमेकीहरु पनि थिए ।
श्रीमती र छोरीले समेत हाडनाताको आरोप लगाए । हाडनाता करणीको कुरा आएपछि प्रहरी निरीक्षक थपलिया झस्किए । मदिरा सेवन गरेर सधैं कुटपिट गरिरहने भएकाले आरोप लगाएको हो कि भनेर थपलियाले बच्चीलाई राम्ररी सोधे ।
उनले ‘हो’ नै भनिरहिन् । त्यसपछि जाहेरी दिन लगाइयो । बुधबार उनीहरुले जाहरी दिए । त्यो जाहेरीका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय, धनौलीले हाडनाता करणीमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रहरीले बुधबार नै अदालतबाट उनीविरुद्ध सात दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ । एउटी बच्चीले विश्वास, भरोसा र सुरक्षा कोबाट पाउँछिन् ? अभिभावक, परिवार वा आफन्तीबाट ।
बुवा नै यस्तो कुकर्ममा लागेपछि कसको विश्वास गर्नु ? समाज अपराधीकरण हुँदै गएको नमूना हो यो । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा बाँकेमा जबरजस्ती करणीका २८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । चार वटा करणी उद्योगका मुद्दा छन् ।
प्रहरीका अनुसार, अधिकांश आफन्ती, चिनेजाने, छिमेकीबाट अपराध भएका छन् । बाँकेमा घरेलु हिंसा अधिक छ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा २०२ वटा जाहेरी परेका छन् । घरेलु हिंसा विस्तारै अपराधमा परिणत भइरहेका छन् ।
९० प्रतिशत घरेलु हिंसाको कारक मदिरा हुने गरेको प्रहरी निरीक्षक थपलिया बताउँछन् । ‘मदिराले हिंसा र अपराध बढाएको छ, प्रहरी निरीक्षक थपलियाले भने, सधैंको झगडा, किचकिच अपराधमा परिणत हुने गरेका छन् ।’
कोहलपुरको पिपरी तनावग्रस्त: शव सडकमै, ठुलो सख्यामा प्रहरी परिचालन
कोहलपुरको पिपरीमा ट्रकको ठक्करबाट बृद्धाको मृत्यु, पिपरी तनावग्रस्त
जुम्लामा सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीलाई नेपालगञ्ज ल्याइयो